သုက်ပန်းခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
သုက်ပန်းခြင်းသည် သုက်ရည်များ လိင်တံ မှ ပန်းထွတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် လိင်အထွပ်အထိတ် (orgasm) ရောက်လေ့ရှိသည်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ် ကြွက်သားများ ဆက်တိုက် ကျုံ့ကြွခြင်းဖြင့် အဖို ဂမိတ် ပါသော သုက်ရည်ကို လိင်ချောင်းမှ တစ်ဆင့် မိန်းမ အင်္ဂါ အထိ သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် လိင်စိတ်ဆွခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရှားပါးသော အဖြစ်မှာ ပရောစတိတ် ရောဂါ ကြောင့်လည်း သုက်ပန်းခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။ သုက်ပန်းခြင်းသည် အိပ်ပျော်စဉ် တွင် အပျော် အိပ်မက်များကြောင့် လည်း ဖြစ်တတ်သည်။
သုက်ပန်းခြင်းတွင် ထုတ်လွှတ်ခြင်း နှင့် ပန်းထုတ်ခြင်း ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းရှိသည်။ ထုတ်လွှတ် အကန်စိတ် (ejaculatory reflex) ၏ ထုတ်လွှတ်ခြင်း အဆင့်တွင် အလိုလျောက်ထိမ်းချူပ်သော နမ်ကြော စနစ် (sympathetic nervous system) ၏ ထိမ်းချူပ်မှုအောက်တွင် ဖြစ်ပြီး ပန်းထုတ်ခြင်း အဆင့်ကို စပိုင်နယ် အကန်စိတ် (spinal reflex) ၏ ထိမ်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည်။ အလိုလျောက် အကန်စိတ် မှ သုက်ပန်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သုက်ပန်းခြင်း မှ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ထုတ်လွှတ်ခြင်း ကနဦးပိုင်းတွင် "ပြန်လမ်းမရှိသော" ခံစားချက်များ ရရှိကြပြီး ၎င်းကို မထိမ်းနိုင်သော် သုက်ပန်းခြင်း အမှတ် ဟုခေါ်သည်။ သုက်ပန်းစဉ်တွင် သုက်ကောင်များသည် ဆီးအိမ် နောက်ရှိ ပြွန်နှစ်ချောင်းကိုဖြတ်ကာ သုက်လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် ယက်ကန်၍ တက်လာသည်။ Seminal Vesicle များက အရည်ထပ်ထဲ့ပြီး သုက်လမ်းကြောင်း က ဆီးတံ နှင့် တဖန် ပေါင်းပြန်သည်။ ပန်းထုတ်ခြင်း အဆင့်တွင် သုက်ရည်များကို ဆီးပြွန်၏ မှန်မှန် ကျုံ့ကြွခြင်းများဖြင့် ပန်းထုတ်သည်။
မှန်မှန် သုက်ပန်းခြင်း သည် ယောက်ျား တို့ လိင်အထွပ်အထိတ်ရောက်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုက်ပန်းခြင်းကို ဖောင်းကြွသော အသီးကဲ့သို့ရှိသည့် bulbospongiosus ကြွက်သားများက ပန်းထုတ်သည်။ ထုံးစံ ယောက်ျား လိင်အထွတ်အထိတ် ရောက်ခြင်းမှာ ၁၇ စက္ကန့်ခန့်ကြာပြီး စက္ကန့် အနည်းငယ်မှ တစ်မိနစ် အထိ လူအလိုက် ခြားနားနိုင်သည်။ လိင်အထွတ်အထိတ် ရောက်စ၌ သုက်ရည် အပြွက်များ ဆီးလမ်းကြောင်းထဲသို့ ရောက်ပြီး ထုတ်ခြင်း အထိတ်ကို ရောက်ကာ တဖြည်းဖြည်းခြင်း လျော့ကျသွားသည်။ ထုံးစံမှာ ယောက်ျား လိင်အထွတ်အထိတ် ရောက်ခြင်းတွင် လိင်တံ ထိတ်ရောက်သည် အထိ ၁၀ မှ ၁၅ ချက်လောက် ကျုံ့ထုတ်ပြီး ကျုံ့သည့်အခါတိုင်း အတိုင်းမရှိသော သာယာမှုကို ပေးသည်။ ပထမ တစ်ချက် ကျုံ့ထုတ်လိုက်ပြီးလျှင် အလိုလို ဆက်၍ ကျုံ့ထုတ်ခြင်းမှ တားမြစ်ရန် နည်းလမ်းမရှိခြေ။ ကျုံ့ထုတ်ခြင်းနှုန်းသည် လိင်အထွတ်အထိတ် ရောက်စဉ် အတွင်း တဖြည်းဖြည်း နှေးလာသည်။ ပထမ တစ်ချက် ကျုံ့ထုတ်နှုန်းသည် ၀.၆ စက္ကန့်ကြာပြီး နောက်တစ်ခါ ကျုံ့ချက်သည် ၀.၁ စက္ကန့်ပို၍ပို၍ ကြာလာသည်။ ယောက်ျား အများစုသည် လိင်အထွတ်အထိတ် နောက်ဆုံးတွင် ထူးခြားသော အပိုဆု သာယာမှု ရှိသည်။
↑ Bolen, J. G., (1980-Dec-9). "The male orgasm: pelvic contractions measured by anal probe". Archives of Sexual Behavior (6): 503-21. doi:10.1175/1520-0442(2002)015<0487:SOCASI>2.0.CO;2. PMID 7458658.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သုက်ပန်းခြင်း&oldid=639441" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။